नागरिक आवाज | News Polar
भूकम्पले क्षति पुर्याएका आवास निर्माणमा ढिलाइ
भीमेश्वर । विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका घरको पुनर्निर्माण गर्न किस्ता नआउँदा आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । पुनर्निर्माण आयोजना जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ दोलखाका प्रमुख गणेश आर्यालका अनुसार जिल्लामा एक हजार ८२१ जनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता वापत रु १८ करोड ५० लाख रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । अहिले कार्यालयमा रकम लिन प्रभावितको […]
भगवान कृष्णको पनि निजी सम्बन्ध जटिल थियो। रामको पनि वैवाहिक सम्बन्ध निरासाजनक रह्यो। बुद्ध पनि पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापनमा कमजोर नै ठहरिए। नेल्सन मण्डेला, अब्राहम लिंकनजस्ता महामानवहरूको पनि बहुविवाहका उदाहरण छन्। नरेन्द्र मोदि विवाह भएपनि राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितताका लागी पत्नीसँग अलग बसेका हुन्। डोनाल्ड ट्रम्प, इमरान खान आदि चर्चीत नेताहरूको पनि शुरूवाती वैवाहिक सम्बन्ध असफल रहेको […]
झी नेवा लैङ्गिक हिंसा जातीय छुवाछूत शासनबादी अधिनायकवाद सरकार नेवा विस्थापित गुरुयोजना कोही नेवाःले नभई गैर नेवा राज्य लगायत अन्य विभिन्न नाटकीय संघ संस्थाहरुको हाइ हाइ गर्न, तेस्तै परे अभियानको नामको खोल ओडि राज्यको ढुकुटीमा गिद्घ नजर लगाइ सखाप पार्ने समय भइसक्यो । तर , मेरो प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई के यो लैङ्गिक हिंसा होइन ? के […]
कंचनपुरकी निर्मला हत्या कान्डको घटना भएको पनि झन्डै ४ महिना भो क्यारे । समाचारमा आए जस्तो नै हो भने सुन्दा पढ्दा हेर्दा बम दीदी बहिनीहरूको त्यो घर नेपाल का विशिष्ट अनि भारतीय विशिष्टहरु को मनोरंजन गर्ने थलों नै हो कि जस्तो अनुमान लगाउन सकिन्छ ! समाचारमा अाएका कुरा त्यस्तै नै छन् । विशिष्टहरुको मनोरंजनका क्रममा नै […]
विमानस्थलमा टोपी फुकाल्नुपर्दा …
काठमाडौ – पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल विदेश भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो । विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा उहाँलाई टोपी फुकाल्न भनेपछि उहाँको कनसिरी तातिएर आयो । सुरुमा त उहाँले मान्नुभएन । तर दोस्रो व्यक्तिले समेत टोपी फुकाल्न भनेपछि नफुकाली धरै पाउनुभएन । यो घटनाले आफ्नो स्वाभिमानमा चोट पुगेको डा. ढकालले बताउनुभएको छ । […]
दिब्या सिंह राठोर नेपालमा गत बैशाख १२ गते र २९ गते गएको भूकम्पमा परि नेपालको डेढ दर्जन जिल्ला पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस विपत्तिमा जुन रुपमा सरकारले गर्नु पर्ने हो त्यो रुपमा काम गरेको छैन । जनताको राहत तथा उद्धारमा सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । यति मात्र होइन मित्रराष्ट्रहरुले गरेको सहयोगको पनि […]
दुई विशाल छिमेकीले पत्तै नदिइ आफूले दावी गर्दै आएको भूभागमा सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरिदिएपछि नेपाल झस्किएको छ। पटकपटक बल्झिरहने यो सीमा विवादको चुरो के हो त लिपुलेकलाई नेपालले भारत र चीनसंगको आफ्नो त्रिदेशीय विन्दु मान्दै आएको छ जुन दावीलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ तात्कालीन ब्रिटीश इण्डिया र नेपालबीच दुई सय वर्षअघि भएको सुगौली सन्धिको […]
दिल साहनी नेपाली संसारको यो असार महिना कि धानको कुरा गरेर बित्ने भयो । कि संविधानका कुरा गरेर । हुन सक्दछ धान र संविधानले नेपाली जीवनलाई निकै प्रभाव पारेको छ । यतिबेला धानका कुरा केही कम भएका छन् । धेरै नै कम भएका छन् । असारको पन्ध्रह गएर पनि होला । सिंगो असार नगए पनि […]
कमल मादेन जनसंख्याको बदलिँदो अवस्थासँगै नेपालमा जातजातिहरुको अवस्थितिमा उलटपुलट भएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पहाडे बाहुन र नेवार लगायतका केही जातिहरु घटेका छन् भने क्षेत्री, मधेसी, मुसलमान र कामीको जनसंख्या प्रतिशत घटेको छ । पहाडे जनजातिको पनि प्रतिशत घटेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले १२५ जाति तथा समुदायहरुको पहिचान गरेको छ । तीमध्ये […]
-आशिष नेपाल- हरेक वर्ष हाम्रो देशमा दशै भन्दा पनि ठूलो चांड आउँछ जसमा सहभागी हुुन्छन् विधार्थी, शिक्षक, अभिभावक, साथीभाइ, शिक्षा प्रणाली र देशको भविष्य । त्यो चाड हो एस.एल.सी चालु वर्षको अन्तिम महिना चैत्र देखि सुरु भएर नयाँवर्षको दोस्रो वा तेस्रो महिनाको दोस्रो साता सम्ममा पुगेर टुङगीन्छ एस.एल.सी. चाड । अनि फैसला हुन्छ कयौं विद्यार्थीको […]